Badbaabada Hooyada: Wax Ka Ogow 14 Arrimood Oo Aanay Haweenaydu Guriga Ugu Dhali Karin Loona Baahan Yahay Inay Cisbitaal Ku Umusho | FooreNews
Home Barnaamijo Badbaabada Hooyada: Wax Ka Ogow 14 Arrimood Oo Aanay Haweenaydu Guriga Ugu Dhali Karin Loona Baahan Yahay Inay Cisbitaal Ku Umusho
FoorenewsFeb 17, 2018Barnaamijo, Suugaan0
Maadaama hooyooyin badan ay doorbidaan inay guryaha ku fooshaan, waxaa muhiim ah in uurkaasi uu yahay mid si dabiici ah loogu dhalin karo xaafadda, laakiin haddii ay jirto cillad keensan karta in foosha dhib ka dhasho taasoo saameyn karta hooyada ama uurjiifka waxaa haboon in xarun caafimaad ay hooyadu ku umusho.
Cilladaha ugu muhiimsan ee qasab ka dhigaya in hooyadu ay cisbitaalka ku umusho waxaa ka mid ah:
1. Hadduu uurkii kuugu horeeyay yahay ku dadaal inaad ku foolatid meel dhakhtar laga heli karo haddii ay dhibaato timaado.
2. Haddii uurkii hore lagugu qalay waa muhiim inaad cisbitaalka ku dhashaa, waa laga yaabaa in fursad lagu siiyo inaad si caadi ah u dhashid inta aan mar labaad lagu qalin.
3. Haddii makaanka aad ku lahayd buro “Fibroid” inta aanad uur yeelan, sidaana aad uur ku qaaday, waa muhiim inaad cisbitaalka ku dhashaa.
4. Haddii aad sidid mataano ama ka badan waa khasab inaad cisbitaal ama xarun caafimaad ku dhashaa.
5. Haddii da’daadu ay ka weyn tahay 35 sano, uurkii kuugu horeeyayna uu yahay waa muhiim inaad cisbitaal ku dhashaa sababtoo ah waxay haweenku la kulmaan dhibaatooyin dhowr ah oo xilliga foosha lagu bararugo.
6. Haddii aad qabtid macaanka uurka, waxay u badan tahay in uurjiifka miisaankiisu uu weyn yahay, waa inaad ku dhashaa cisbitaalka.
7. Haddii aad isku ogaan jirtay cillad ku taalla qaybta hoose ee makaanka ama hore dhakhtarku kuugu sheegay, waa inaad mar walba ood uur qaadid ku dhashaa cisbitaalka illaa kumbuyuutarku uu kuu sheego wax ka duwan mooyee.
8. Haddii fooshii hore aad ku dhibtootay ama ilmuhu kaaga saqiiray waa qasab in markan aad cisbitaal ku dhashaa.
9. Haddii aad tahay hooyo hore u dhashay caruur badan, waxaa laga yaabaa in makaankaagu uu dabacsan yahay oo aad u baahatid wax foosha kaalmeeya, sidaa darteed waa muhiim inaad xarunta caafimaad ku dhashaa.
10. Haddii fooshu ay soo dhakhsato iyadoo aan xilligeeda la gaadhin waa inaanad guriga ku dhalin oo aad cisbitaalka tagtaa.
11. Haddii ilmaha aanu toosnayn oo dabo keen ama dhinac keen uu yahay waa qasab inaad cisbitaalka ku dhashaa oo aanad isku dayin guriga.
12. Hadduu dhiigaagu yar yahay, lagana yaabo inaad dhiig-baxdid waa muhiim inaad ku dhashaa meel aad ka heli kartid dhiig.
13. Haddii aad qabtid xanuunka dhiig-karka, wadne xanuunka ama kilyaha waa qasab inaad cisbitaalka ku dhashaa, dhakhtarkana la socodsiisaa xaaladahaaga caafimaad.
14. Hadduu dhakhtarkaagu kuu sheegay cillad dhinaca uurka oo ku saabsan adiga ama uurjiifka waa inaad ku dhashaa cisbitaalka.
Hooyooyin badan ayaa ka fogaada inay cisbitaalka ku dhalaan iyagoo ka fekeraya arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay Qarashka ku baxa cisbitaalka, Cabsi in hooyadu lagu qalo caruurta iyo Wacyi la’aan ku aadan faa’idada ku dhalidda cisibtaalka ama dhibka mararka qaar ka dhalan kara in guryaha lagu dhalo.
Maxaa Sababa Ama Keena Dhiig Baxa Hooyada Wakhtiga Dhalmada?
Inkastoo la tuhunsanyahay inay jiraan qodobo badan oo ka qayb qaata imaanshaha xaaladdaan, hadana waxaa si cad loo ogyahay in dhiig baxa saa’idka ah ee ku yimaada hooyada xiliga dhalmada uu saamayn ku yeesho soo saarida hormoonada ee qanjidhka bituwitari. Sidoo kale waxay xaaladani iman kartaa markii uu aad u hooseeyo cadaadiska dhiiggu.
Qanjidjka bituwitari ayaa ah midka maamula inta badan qanjidhada kale ee jidhka ee soo daaya hormoonada. Tusaale hadii loo baahan yahay in la siyaadiyo ama la yareeyo hormoon waxaa fariin u diraya bituwitari qanjidhka ay khusayso inuu soo daayo ama yareeyo hormoonkaasi. Hadii ay yaraadaan hormoonada fariimaha sida ee ka imanaya qanjidhka bituwitari, waxaa yaaranaya shaqada kale ee ay qaban laahaayeen qanjidhada kale ee jidhka, taasoo waxyeelo ku keenaysa shaqada jidhka.
Xaalad kasta oo keeni karta dhiig bax saa’id ah ama cadaadiska dhiigga oo aad u hooseeya xilliga dhalmada sida cillado kajira mandheerta, ama in hooyadu ay uurka ku sido caruur mataano ah waxay siyaadinaysaa fursadaha uu ku dhici karo dhiig-baxu xiliga dhalmada.
Waa Maxay Astaamuhu?
Astaamaha iyo calaamada ayaa ah kuwo soo baxa waqti kadib markii hooyadu la daristo xaaladdan, waqtigaan ayaa noqon kara billo ilaa sanad. Maadaama bituwitari uu yahay qanjidh kontoroola qanjidhada kale ee jidhka, haddii xanuun ku yimaaddo sida dhiigbax waxaa yaraanaya soo saarida hormoonada ee qanjidhada kale. Astaamaha iyo calaamadaha inta badan lagu arko dadka la nool xaaladdan caafimaad waxaa kamid ah
* Hooyada oo ay ku adagtahay ama aan awoodin inay ilmaha naaska nuujiso sababtoo ah caanaha ka imanaya naaska waxaa soo dayntooda ka masuul ah hormoonada loo yaqaano ogsitosin iyo borolaktin kuwaasoo soo saaridoodu aanay macquul ahayn haddii aanu qanjidhka bituwitari soo daynayn hormoonada maamulla qanjidhada kale,
* Timaha hoose ee loo yaqaano bisqinta oo aan lagu arag dadka qaba xaaladdan. Shaqada maskaxda oo yaraata, hooyada oo miisaan badani ku kordho, daal, cadaadiska dhiigga oo hooseeya iyo xiisaha loo qabo galmada oo guura ayaa ah astaamo inta badan lagu arko dadka qaba sheehan’s syndrome.
In si fiican loola tacaalo hooyada xilliga ay dhalayso loona diyaariyo qalabka dhiigjoojinta ayaa ah qodob aad u muhiim ah oo looga hortagi karo dhiigbaxa xiliga dhalmada. Sababta uu ugu badan yahay wadamada soo koroya ayaa ah in dumarka wadamadaas ku dhaqan ay ku umullaan guryaha taasoo keenaysa inaanay helin daryeel caafimaad.
Mala Daaweyn Karaa?
Xaaladdan ayaa ah mid khatarteeda wadata hase yeeshee waxaa jira fursado lagu daweyn karo. Inta badan waxaa la adeegsadaa dawaynta loo yaqaano hormone therapy. Daawadan ayaa ah mid hooyadu qaadanayso waqti aad udheer.
Cisbitaalada oo lagu dhallo ayaa ah arin aad u wanaagsan, waxayna yarayn kartaa heerka dhiigbaxa hooyada, inta badana hooyooyinka Soomaalidu waxay door bidaan guryaha taasoo wadan karta khatar caafimaad. Waxaa wanaagsan in laga warqabo lana ogaado xiliga foosha lana geeyo cisbitaalka hooyada foolanaysa.
Previous PostTaxanaha Yuusuf Garaad Ee Maxaabiistii 77-Kii----Qaybta:12aad Next PostBaddelka Hadhaaga Xukuumaddii Hore Oo Agaasimayaal U Badan Oo Miiska Saaran Iyo Xukuumadda Muuse Biixi Oo Todobaadkan Dhamaystirmaysa + Wajiyo Cusub Oo Mar Kale La Magacaabayo